Waa maxay COVID19? - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Coronavirus (COVID-19) waa cudur uu sababo fayras ku faafa qof ka qof. Fayraska sababa COVID-19 waa coronavirus cusub oo ku faafay adduunka oo dhan. Calaamadaha CVEID-19 waxay u dhexeeyaan min khafiif ah (ama astaamo lahayn) illaa jirro ba'an.
Caawinta kahortaga faafida cudurada neef mareenka sida COVID-19. Mas'uuliyad ah in wajiyada loo xirto dadka hortooda ayaa la dhigay iyadoo dadweynaha la joogo. Maaskarada ayaa kaa caawinaysa adiga iyo dadka aad ka ag dhowdahay iyadoo ay ku jiraan jeermiga faafa cudurkaan. Ku celcelinta ka fogaanshaha bulshada ayaa sidoo kale lagu talinayaa.
Dadka da'doodu ka weyn tahay 60 jir iyo sidoo kale dadka qaba xaalad caafimaad oo daba dheeraatay da 'kasta ha ahaadeene waxay halis sare ugu jiraan jirro halis ah oo ay ku jirto dhimashada cudurka loo yaqaan' Coronavirus 'waana inay tixgeliyaan sii wadista guriga iyo inay nabad ahaadaan.
Tilmaamaha go'aannada ka bixida dibedda
UW-kordhinta waxay abuurtay ilo aad uqurux badan oo kaa caawinaya inaad go'aan gaarto sida ugufiican ee looga baxo bulshada isla markaana dib loola falgalo qoyska iyo asxaabta.
Tilmaamaha UW-Kordhinta ee Bixitaanka
Kheyraadka loogu talagalay Dadka Waaweyn iyo Daryeelayaasha
Recursos Para Adultos Mayores iyo sus Cuidadores
Hay tres videos que habla sobre el Coronavirus. Cada video tiene diferentes temas. Fiidiyowga Primero, habla de la razones porque es importante quedarse en casa. El segundo video, habla sobre como comenzó el virus y como las personas puede a transir el virus y las precauciones que se deben tomar. El ultimo video, habla sobre ciertos programas comunitarios que ayudan a la población de ancianos, y otros programas de nafaqo ayaa lagayaabaa in la iska ilaaliyo.
Macluumaadka waxaa helaya iyo dadka naafada ah
Tijaabinta Darawalnimada Bilaashka ah ee 3 goobood
Dhammaantood waxay iskaashi la leeyihiin Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin (DHS) si loo ballaariyo helitaanka baaritaanka ee Gobolka Brown
Xarunta UWGB -2420 Nicolet Drive, Green Bay, WI
Saacadaha 9 subaxnimo - 4 galabnimo balan balan ah https://doineedacovid19test.com/
Bilaash ayey u tahay qof kasta oo jira 5 iyo wixii ka weyn haddii ay dareemayaan calaamado iyo in kale. Raac tilmaamaha ku saabsan calaamadaha. Natiijooyinka baaritaanka 15 daqiiqo gudahood. UWGB News sii deynta xiriiriye macluumaad dheeraad ah.
Goobaha Cadaaladda ee Degmada Brown - 1500 Fort Howard Ave, De Pere
Isniinta - Jimcaha 8 subaxnimo - 4 galabnimo | Sabti - Axad 8 subaxnimo - 4 galabnimo | Saacadaha way ku kala duwanaan karaan Ciidaha
Prevea Health ayaa kafaala qaadaysa boggan. Waa u bilaash qof kasta haddii aad astaamo leedahay iyo in kale. Raac tilmaamaha ku saabsan calaamadaha. Waxaa lagaa doonayaa inaad soo wacdo si aad ugu sheegto inaad timid. U kaxee garaashka meesha baaritaanka lagu hormarin doono, adiga oo gaarigaaga ku jiraya waqtiga oo dhan. Waa inuu keenaa taleefan gacmeed iyo aqoonsi.
Xarunta Gawaarida Hore ee Sears - 1555 Green Bay Plaza
Isniinta - Jimcaha 6:30 subaxnimo - 6:30 pm | Sabti - Axad 8 subaxnimo - duhur
Bellin Health ayaa kafaala qaadaysa boggan. Bilaash ayey u tahay qof kasta oo la kulma astaamo ama ku dhacay qof qaba COVID.
Diiwaangelinta hore ayaa loo baahan yahay iyada oo loo marayo MyBellin.org ama adoo wacaya khadka taleefanka ee COVID-19 920-445-7313. Waxay ku beddeleysaa goobta tijaabada 600 S. Webster Ave.
Gobolka Wisconsin iyo Adeegyada Caafimaadka ee Vault waxay iska kaashadeen inay bixiyaan ikhtiyaar tijaabo cusub oo COVID-19 ah oo loogu talagalay qof kasta oo ku nool Wisconsin, ama leh astaamo la'aan ama aan lahayn, lacag la'aan. Adeegani cusubi wuxuu u oggolaanayaa dadka inay guryahooda ku soo ururiyaan tijaabooyin candhuuf ah
Ka eeg shabakadda DHS wixii macluumaad dheeraad ah: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/collection.htm
Macluumaadka Tijaabada ah ee COVID-19
Hoos waxaa ku yaal adeeg bixiyeyaasha Degmada Brown oo kaa caawin kara macluumaadka iyo baaritaanka COVID-19. Prevea, Bellin, iyo CVS waxay bixiyaan baaritaan bilaash ah oo COVID-19 ah. Waxay isticmaalaan baaris hore si ay ugu qalmaan.
Hor: Tag myprevea.com Macluumaadka baarista, sida loo codsado imtixaan, iyo meelaha.
Caafimaadka Bellin: Wac 920-445-7313 ama 1-888-330-3524. Guji tan Caawinta Helitaanka Caafimaadka Bellin Caafimaadka ee Diyaaradda COVID-19.
CVS: Tag cvs.com/minuteclinic/madax-qiimayn Si aad u ogaato haddii aad u qalanto imtixaan iyo inaad raadiso goobo maxalli ah.
Caafimaadka Aurora: Ka wac khadka tooska ah taleefanka 866-443-2584. Halkan guji Caafimaadka Aurora COVID-19 Flyer.
Walgreens: Tag https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing soo gal magaaladaada si aad u hesho goob maxalli ah oo aad u sameyso sahan baaris si aad u ogaato haddii aad u-qalanto iyo in kale.
La soco astaamaha
Feejignow astaamaha COVID-19 ee suurtagalka ah oo ay ku jiraan,
Sanka oo dareeraya
Dhimasho cusub ama urta
Fadlan kala tasho dhaqtarkaaga wixii ah astaamo kale oo aad u daran ama quseeya adiga.
Ma aha in qof kasta oo qaba COVID-19 uu leeyahay dhammaan astaamahan. Dad badan, astaamuhu waa kuwo fudud, oo aan lahayn qandho. Waxaa muhiim ah in la ogaado inaad weli u faafin karto (u gudbin karto) fayraska dadka kale xitaa haddii aad leedahay calaamado khafiif ah ama aanad lahayn. Astaamuhu waxay soo muuqan karaan 2-14 maalmood ka dib soo-gaadhista fayraska.
Macluumaadka ka socda Waaxda Adeegyada Caafimaadka Wisconsin. https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/symptoms.htm
Goorma Ayaa La Raadsanayaa Udirista Caafimaadka Degdegga ah
Haddii aad leedahay mid ka mid ah kuwan calaamadaha digniinta degdega * loogu talagalay COVID-19 hel isla markaaba daryeel caafimaad
Xanuun joogto ah ama cadaadis xabadka ku jira
Awood la’aanta ama soo jeedidda
Dibnaha bishimaha ama wajiga
* Liiskani ma aha mid loo wada dhan yahay. Fadlan kala tasho dhakhtarkaaga wixii astaamo kale ee daran ama adiga kugu saabsan. Wac 911 haddii aad qabtid xaalad caafimaad oo degdeg ah: Ogeysii howlwadeenka aad haysato, ama aad u maleynaysid inaad yeelan karto, COVID-19. Hadday suuroggal tahay, maro maro hagoog ah kahor inta uusan gargaar caafimaad imaan.
Macluumaadka CDC waxay cusbooneysiisay 6.25.2020. Tag tan Iskuxirka Calaamadaha CDC Wixii macluumaad dheeraad ah.
Ka caawi ka hortagga faafitaanka dhammaan cudurrada neef-mareenka.
Iska ilaali xiriir dhow lala yeesho dadka jiran.
Ku dabool qufacaaga ama ku hindhis xaashi, ka dibna ku tuur xaashida qashinka. Ku dhaq gacmahaaga ama ku nadiifi gacmo nadiifiyaha ugu yaraan 60% aalkolo.
Gacmahaaga badanaa ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi. Gaar ahaan cuntada kahor, kadib markaad musqusha isticmaasho, hindhiso, qufacdo, ama sanka kaxayso.
Nadiifi oo jeermiska jeermiska taabsiiya walxaha iyo dusha sare.
Ka fogow wadaaga waxyaabaha, sida: saxamada, koobabka cabitaanka, koobabka, maacuunta wax lagu cuno, shukumaannada, ama gogosha.
Guriga joog marka aad jiran tahay, marka laga reebo inaad hesho daryeel caafimaad.
Si adag ugu talin inaad isticmaashid maro daboosho wejiga / maaskaro inta aad dadweynaha ku jirto.
Talobixinta CDC kooxaha khatarta sare leh
Xarunta Xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay ogaatay dadka waayeelka ah iyo dadka qaba xaalado caafimaad oo daran sida wadnaha, sambabbada, cudurka kalyaha ama kaadi macaanku inay khatar weyn ugu sugan yihiin CVID-19 jir aad u daran. CDC waxay kugula talineysaa hadii aad qatar ugu sareysa ugu xanuunsato COVID-19, waa inaad:
Hubso inaad haysato saad kufilan iyo cunto hadii aad ubaahantahay inaad is karantiilid 2 todobaad ama kabadan.
Qaado taxadar maalin kasta ah si aad meel udhaxeyso naftaada iyo dadka kale. Jihaynta Bulshada ee 6 fuud ama ka fiican ayaa lagula talinayaa.
Markaad dadweynaha u baxdid, xiro maaskaro, ka dheerow dadka kale ee jiran, xaddid xiriir-dhaw, oo had iyo goor gacmahaaga dhaq.
Ka fogow dadka inta ugu badan.
Inta lagu jiro cudurka 'COVID-19' ee ka dilaaca bulshadaada, guriga joog inta ugu badan ee suurtogalka ah si aad u yareyso halista aad ugu jirtid.
Macluumaadka xarumaha Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada, (CDC)